Uhlobo lwedijithali kwipeyinti yeoyile kaJeremy Mann | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Andifuni ukungaqondi kakuhle, ipeyinti yeoyile ikude kwidijithali, kodwa xa ndandiqala ukubona umzekeliso wentloko kaMann, into yokuqala endayiqondayo kukuba bendijonge umsebenzi wedijithali owenziwe ngeFotohop. Yayingumbono wam wokuqala kwaye kungengenxa yokungabikho kobuchwephesha, kodwa ngenxa yokuba uninzi lwee esona siqwenga sidijithali sinazo ezo ntlobo zemivumbo Uyichaza kakuhle njani iMann kweminye yemisebenzi yakhe yemifanekiso.
Ummangaliso omkhulu weza kamva xa Ndibuze kweminye imisebenzi yakhe ukumangaliswa yindlela yakhe eyahlukileyo kunye nento endiyibize ngokuba "yidijithali." Andingomntu wokwenza into efanayo, kodwa ndigqithisela kuphela lo mbhalo wenziwe kum xa ndicinga ngomsebenzi walo mzobi.
Kwaye imigca eshinyeneyo echane ngqo kwiinkcukacha ezithile, ilunge kakhulu xa uMann eqhutywa ngumnqweno oko kukuzoba izandla.
Izandla ezimbalwa ezininzi ngabapeyinti bakudala bashiya abanye kubo ukuba bagqibe kwaye oko kuye kwathetha ukuba lizinyo elikhulu kwabanye abazobi abaninzi.
Ayisiyiyo kuphela iMann uzinikezele ukumangaliswa kwisitayile sakhe kwaye loo mfazi ungacacanga kwaye ungafiyo, kodwa kubume beendawo zasezidolophini sifumana ezona zixhobo zakhe zobugcisa.
Abanye izigcawu zasezidolophini endikushiya kuzo ufumanisa ntoni yeyakho webhsayithi apho unokufumana wonke umsebenzi wakhe.
Un Umzobi uhlala e-Oakland, California Kwaye ufumene amabhaso amaninzi kwaye ukhankanyiwe njengomnye wabaculi abangama-25 bangomso ngolushicilelo oluthile oludumileyo.
Unayo neyakho Facebook, nangona engashicileli umsebenzi wakhe omninzi. Ngethamsanqa sinayo I-instagram yakhe apho kubonakala ngathi kunokwenzeka ukuba ipapashe eminye yemisebenzi yakhe emitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Uhlobo oluchanekileyo "lwedijithali" kwipeyinti yeoyile kaJeremy Mann
Ukubukeka okumangalisayo kwemifanekiso kaFaiza Maghni